Wadada xiriirisa janaale iyo buufoow oo dayactir ka bilaaween ciidanka AMISOM (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Sawiro ay soo bandhigeen ciidamada Midowga Afrika ee Amisom ayaa muujinaayay ciidamada oo ku guda jira dayactir ku aadan wadada xiriirisa Janaale iyo Deegaanka Buufow ee Gobolka Shabelaha hoose.
Ciidamada Amisom ayaa dayactirka wadadaan bilaabay, kadib markii wadooyin kale oo ay mari jireen ay noqdeen kuwa halis badan oo Miinooyin badan lagu duugay, taasina ay keentay in Amisom ay dayactir ku biloowdo wadadan.
Ciidamada Amisom oo ballaarinaya wadada ayaa waxa ay jareen dhir wadada hareeraheeda ku tiilay, iyaga oo adeegsanaya gaadiidka waaweyn ee cagaf cagafta loo yaqaan.
Xilli ay ku guda jireen dayactirka wadadaan ayaa waxa ay la kulmeen weerar culus oo kaga yimid dhanka ciidamada Shabaab, waxaana dagaal culus uu ka dhacay deegaanka Garshiini oo ku dhaw deegaanka Janaale, Dabayaqaadii Isbuucii aan soo dhaafnay.
Ciidamada Amisom ayaa doonaya wado weyn oo si nabadgelyo ah ay ku maraan inay ka sameeyaan inta u dhaxeysa Buufow iyo Deegaanka Janaale ee Gobolkaasi.
Al Shabaab ayaa inta badan waxa ay miinooyin ku aasaan wadooyinka ay maraan ciidamada Amisom ee howlgalka u jooga Somaliya.